🥇 ▷ Qalabka casriga ah ee Android ayaa hadda ka adag sidii loo khawano lahaa marka loo eego iPhone ✅
Qalabka casriga ah ee Android ayaa hadda ka adag sidii loo khawano lahaa marka loo eego iPhone
Qalabka casriga ah ee loo yaqaan ‘Android smartphone’ ayaa hadda aad uga adag in la jabsado marka loo eego iPhone, ayuu yidhi Zerodium, oo ah shirkad ku takhasustay iibsashada iyo iibinta weerarada kombiyuutarka. Sida laga soo xigtay iyada, Google waxay ku guuleysatay inay horumar la taaban karo ku sameyso amniga Android inta lagu jiro casriyeyn kasta oo weyn. Dhinacooda, taleefannada casriga ah ee Apple Waxaa ku baaba’ay ciladaha amniga ee halista ah ee lagu aqoonsaday iMessage, hab maamuuska farriinta deg-degga ah, iyo Safari, oo ah biraawsarka shabakadda ee caadiga ah ee lagu dhisay.
Zerodium ayaa hadda cusbooneysiisay liiskeeda qiimaha si ay u iibsato qaab jabsiga, soo wargeli asxaabteena ZDNet. Hadda, jabsi abuuraya khiyaamo si uu u khawano taleefanka casriga ah ee Android iyada oo aan cid kale milkiileheeda ka dhexeeyn ayaa ah bixiyay ilaa $ 2.5 milyan. Nidaam la mid ah oo lagu khawano iPhone wuxuu qiimahoodu yahay $ 2 milyan oo keliya. Xaalku aad ayuu uga duwanaa sanad ka hor. Waqtigaas, burcad badeedda casriga ah ee Android waxay kaliya rajeyn karaan $ 200,000. “Markii ugu horeysay, waxaan bixinaynaa wax ka badan Android marka loo eego macruufka,” ayuu Zerodium ku sheegay akoonkiisa Twitter.
Sidoo kale aqri: iPhone, Android: aalad cusub ayaa furmi kartaa ku dhawaad ​​taleefan kasta
Android iyo iOS: Hada way fududahay in la khawano iPhone
Mar la weydiiyay ZDnet, Chouakri Bekrar, maamulaha Zerodium, ayaa sharraxaya arrintaas haakar badan ayaa maanta bixiya habab lagu jabsado iPhone. Sidaas darteed, suuqa weerarada kombiyuutarka ee ku dhaca macruufka ayaa ah mid buuqsan. Badi brokersiyaasha sida Zerodium waligood waxay diirada saaraan macruufka. Runtii, inta badan iPhone-ka suuqa ku jira ayaa ilaa maanta socda. Sida laga soo xigtay Apple, 85% iPhone waxay ku shaqeysaa qalabka ‘iOS 12’. Waxa kaliya ee ay tahay inay sameyaan waa inay xoogga saaraan hal nooc oo OS ah.
Waa iska soo horjeedda on Android. Soo saare kastaa wuxuu isticmaalaa dulsaar iyo waxyaabo kala duwan. Sidoo kale, dhamaan telefoonada casriga ah ee Android kumaysan rakixin Android 10, Pie ama Oreo, 3-da nooc ee ugu dambeeyay OS. Ugudambeyn, jajabinta Android waxay adkeynaysaa shaqada haakariska. Amaanka Android wuxuu horumar ka sameynayaa nooc kasta oo ka mid ah nidaamka qalliinka isaga oo uga mahadcelinaya Google iyo kooxaha amniga ee Samsung. Markaa way adkaanaysaa oo way adag tahay in la sameeyo silsilado hawlgal ah oo loogu talagalay Android, waana ay ka sii adag tahay in la horumariyo habab aan u baahnayn isticmaale kasta. is dhexgalka, ”ayuu raaciyay Chouakri Bekrar.
Safari iyo iMessage waa nugul yihiin, ayuu yiri Zerodium
Zerodium wuxuu ka helay isbadalada ka soo hor jeeda macruufka. “Bilihii la soo dhaafay, waxaan aragnay koror ku yimid tirada telefishannada macruufka, gaar ahaan inta u dhexeysa Safari iyo iMessage, oo ay soo saareen oo ay iibiyeen cilmi-baareyaal daafaha adduunka ku nool. Xagaagan, Mashruuca Google Zero wuxuu kaloo helay 4 fulin oo ka kooban 5 nugul halis ah oo dhowaan laga helay iOS. Jebinta noocan ahi waxay u oggolaatay inay si fudud uga jabsadaan iPhone iyaga oo u diraya farriin sahlan iMessage. Apple waxay si dhakhso leh u hagaajisay ciladaha iyada oo loo marayo casriyeyn.
“Markii laga jawaabayo caqabadahaan farsamo ee cusub ee la xiriira amniga Android iyo u kuurgelidda isbeddelada suuqa, waxaan aaminsanahay in la joogo waqtigii la siin lahaa gunnooyinka ugu sarreeya ee looga faa’iideysan karo Android illaa iyo inta laga hagaajinayo amniga macruufka oo la xoojinayo qaybaha daciifka ah, oo ah iMessage iyo Safari” Madaxa shirkadda Zerodium. Nasiib darrose, Google ayaa isla jihadaas ku badan. Horraantii 2018, David Kleidermacher, oo ah ninka mas’uul ka ah amniga Android, ayaa yiri “aad bay uga adag tahay haakarisku inay ku helaan nuglaanshaha amniga nugul nidaamka Android.” In kasta oo khaladaadki hore, Google waxay ku guuleysatay inay bislaato OS-yada Mobilada. Maxaad u maleynaysaa natiijada ka soo baxda ‘Zerodium’? Qalabka macruufka ah miyuu iOSku jiraa mid qaldan? Waxaan ka sugeynaa fikirkaaga faallooyinka.
Ogeysiis: Waxaan dib u cusbooneysiin ku sameynay qiimaheenna faa iidooyinka waaweyn ee Mobilada. Markii ugu horreysay, waxaan bixin doonnaa wax badan oo ah barnaamijka Android marka loo eego macruufka. Waxaan sidoo kale ku darnay WhatsApp & iMessage (0-guji) laakiin waxaan yareynay bixinta iOS-ka (1-guji)https://t.co/0NBRnq4I4y pic.twitter.com/XqpmAKmmKF
– Zerodium (@Zerodium) Sebtember 3, 2019